Web-DL 1080P – Quality – Channel Myanmar
OK! Madam(2020) OK! Madam(2020)(နင်းကန်လန်းတဲ့ကားမို့ WEB-DL 1080P,720p တို့ဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်...)သာမန်ဈေးလေးထဲမှာ မုန့်လုပ်ရောင်းတဲ့ မီယောင်းဟာ ကွန်ပျူတာပစ္စည်းတွေပြင်တဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဆော့ဟွမ် သမီးလေးဖြစ်သူ နာရီတို့နဲ့အတူ နေထိုင်တယ်.... တစ်နေ့မှာ ဟာဝိုင်အီကိုသွားဖို့ ကံစမ်းမဲပေါက်သွားပြီး အပျော်တွေလွန်ရင်း ခရီးသွားဖို့ဖြစ်လာတယ်ပေါ့.... ဟာဝိုင်အီကိုသွားနေတဲ့လမ်းခရီးဟာ တကယ်ပျော်စရာလို့ထင်ရပေမယ့် လေယာဉ်ပေါ်မှာ မမျှော်လင့်တဲ့အဆုံးဝါးဆုံးပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်.... သူတို့လေယာဉ်ပေါ်မှာ အရမ်းကိုအန္တရယ်များလှတဲ့ သူလျှိုပါလာတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းရလို့ မြောက်ကိုရီးယားတပ်မှူးဖြစ်သူနဲ့အဖွဲ့တွေဟာ လေယာဉ်ကိုပိုက်စိပ်တိုက်ရှာကြတော့တယ်... စီးနင်းလာတဲ့ခရီးသည်တွေအားလုံး ဓားစာခံဖြစ်သွားကြတယ်ပေါ့.....မြောက်ကိုရီးယားကအဖွဲ့ကလည်း တကယ့်ကိုကြမ်းပေ့ရမ်းပေ့ဆိုတဲ့ လက်မရွှံအဖွဲ့တွေ....အဲ့ဒီနောက်တော့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ပြဿနာမျိုးစုံစပါတော့တယ်....ဒီကားက ဇာတ်လမ်းစပြီး မိနစ်(၃၀)လောက်မှာတင် ပွဲစကြမ်းပါတယ်....လေယာဉ်ပေါ်ရဲ့ နေရာကျဉ်းကျဉ်းလေးတွေမှာ အက်ရှင်ခန်းတွေက တကယ်ကိုမိုက်တဲ့အပြင်ကြည့်ရတာတွေတကယ့်ကိုရှင်းပါတယ်...စိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့အက်ရှင်ခန်းတွေပါတဲ့အပြင်ဇာတ်လမ်းကတော်တော်ကောင်းပြီး လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ နောက်ကွယ်က ထင်မထားတဲ့ အကြောင်းအရာတွေနဲ့မို့အားလုံးလက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်းပါ...သရုပ်ဆောင်တွေကလည်း ဒိတ်ဒိတ်ကျဲတွေပါ...တောင်ကိုရီးယားရဲ့စွယ်စုံရမင်းသမီးကြီး အုမ်းဂျောင်ဟွာ နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီး ဘတ်ဆောင်အုန်း ဇာတ်ရုပ်တိုင်းမှာပိုင်နိုင်တဲ့ မင်းသားလီဆန်ယွန်း Running Man လီဂွမ်ဆူရဲ့ချစ်သူမိန်းကလေး မင်းသမီးလီဆောင်ဘင်း နဲ့ အထူးဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်အဖြစ် မင်းသားဂင်နမ်ဂီတို့အပြင် နာမည်ကြီးဇာတ်ပို့အများအပြား ပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်...File Size :(1.8GB)(850 MB) and (380 MB) Quality : WEB-DL 1080P,720p Format…mp4 Duration…01:40:00 Genre : Action ...
V (2020) V(2020)ကားကောင်းတွေ ငတ်နေကြတယ် ကြားလို့ ကျွန်တော်တို့ စောင့်နေတဲ့ကားကြီး ဒီနေ့စ ရောင်းရောင်းချင်း တင်ပေးနိုင်ဖို့ ကြိုးစားထားပါတယ်။ တေလဂူးကားပရိသတ်တွေကတော့ တေလဂူးကားတွေ ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတာ မပြောလည်း သိမှာပါ။ဒီကားဟာ လူသတ်သမားတစ်ယောက်နဲ့၊ ရဲအရာတစ်ယောက်တို့ အားပြိုင်မှုကြောင့် ဇာတ်လမ်းက သွေးဆူစိတ်လှုပ်ရှားရလောက်အောင်မိုက်ပါတယ်....အိန္ဒိယကားအများစုထဲ ဗီလိန်ကို အားမရတာ ကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာတော့ ဗီလိန်ကတော့ အားရစရာ ကောင်းပြီးရဲအရာရှိကလည်း အစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှာပါ။ သဲလွန်စပေးပြီး သတ်မယ်ဆိုတဲ့ လူသတ်သမားရယ်၊လူသတ်မှုကို ဖော်ထုတ်မယ့် ရဲအရာရှိရယ် အဓိက ပါဝင်ကစားထားကြတယ်။ကဲခင်ဗျားတို့လည်း စိတ်ဝင်စားကြပြီမဟုတ်လား။ ပွဲကြည့်ပရိသတ်အနေနဲ့ ခင်ဗျားတို့ကို ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်ရောဇာတ်လမ်းထဲ သင့်ကိုပါ ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရော၊ ခင်ဗျားတို့ လူသတ်သမားဖက်က ပါမလား၊ရဲအရာရှိဖက်က ပါမလား။ let's join the game!ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူတွေကတော့ Myint Thu & Nyi Koe ...
Inseparable Bros(2019) Inseparable Bros(2019)IMDb...7.0((ကားအလန်းမို့ WEB-DL 1080P,720Pတို့ဖြင့်တင်ဆက်ပေးထားပါသည်...)) Running Man က လီဂွမ်ဆူ ပါ၀င်သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဒီဇာတ်ကားနဲ့ပဲ 2020 (56th) BaekSang Arts Awards မှာBest Supporting Actor ဆုကို ရရှိသွားခဲ့ပါတယ် ..ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ကျောရိုးယူပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းဖြစ်ပါတယ်..ဘတ်ဒုံဂူ နဲ့ ဂန်ဆယ်ဟာ တို့ဟာ မသန်စွမ်းကလေး စောင့်ရှောက်ရေး ဂေဟာ တစ်ခုမှာ အတူနေထို်င်ကြတာပါ ..ဂေဟာကို တာ၀န်ယူတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီး ဆုံးပါးသွားတဲ့အခါ တာ၀န်ယူမယ့်လူမရှိတဲ့ ဂေဟာကို ဖျက်သိမ်းပြီး ကလေးတွေကိုလည်း အခြားဂေဟာတွေဆီပိုဖို့ လုပ်ခဲ့ပါတယ် ...ဒါပေမယ့် ဘတ်ဒုံဂူနဲ့ ဂင်ဆယ်ဟာတို့ကတော့ အမီခိုကင်းလွတ်ခွင့်တင်ပြီး ညီအစ်ကို ၂ ယောက် မခွဲရဖို့ ဂေဟာ မဖျက်သိမ်းရဖု့ိ ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်..သူတို့ညီအကို (၂)အဲ့ဒီလိုကြိုးစားစဉ်မှာပဲ သူတို့လုံးဝမထင်မှတ်ထားတဲ့ အလှည့်အပြောင်းတွေဖြစ်လာပါတော့တယ်....ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ခံစားကြည့်ကြပါဉီး...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Han Thu Aye ပဲဖြစ်ပါတယ်....File ...
Whispering Corridors3: Wishing Stairs (2003) [Unicode]CM fan တွေအတွက် နောက်ထပ် Horror Movie တစ်ခု တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက 2003 ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် Running Man က မမ Song Ji-hyo က ယွန်ဂျင်ဆောင်းအဖြစ် အဓိကပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် ။ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းယွန်ဂျင်ဆောင်းနဲ့ ဂင်ဆူဟီးတို့ဟာ မိန်းကလေးအနုပညာ အထက်တန်းကျောင်းမှာ ဘဲလေး အကပညာကို တူတူသင်ယူနေကြတဲ့ ကျောင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ ၂ ယောက်က အချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီး အထူးသဖြင့် ဂင်ဆူဟီးက ဂျင်ယောင်းကို အရမ်းတွယ်တာပါတယ် ။ အဲ့လို ချစ်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြား ကံဆိုးမှုတစ်ခုက ဝင်ရောက်လာပါတယ် ဒါကတော့ သူတို့မြို့မှာပြုလုပ်မယ့် ဘဲလေးအကပြိုင်ပွဲပါ ။သူတို့ကျောင်းအနေနဲ့က ကိုယ်စားပြုအကမယ်တစ်ယောက်ကိုပဲ ရွေးချယ်ပြီး ပြိုင်ပွဲကို ယှဉ်ပြိုင်ခိုင်းမှာပါ... ကျောင်းက ဆရာမတွေဟာ ဆူဟီးကိုပဲ ရွေးချယ်ချင်နေတဲ့အခါမှာ ဂျင်ယောင်းတစ်ယောက် ဆူဟီးကိုစကားမပြောတော့ပါဘူး ။ အဲ့နောက် သူတိုအဆောင်ရှေ့က ...